ရုပ်ရှင် – Eleven Media Group
Posted on August 19, 2018 August 20, 2018 by ဆန်းမိုးထွန်း၊ စုမှူးနိုင်
မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအား လာရောက်ကြည့်ရှုကြသည့် ပရိသတ်များကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်တွင် ပေါကားဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများက လှိုင်းထန်ခဲ့သည်။ ထိုလှိုင်းများက မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်အတွင်းရှိ သရုပ်ဆောင်နှင့် ဒါရိုက်တာများအပေါ် ရိုက်ခတ်မှု ပြင်းထန်ခဲ့သည့်အပြင် ဒီထက်ပို၍ ပြင်းထန်မည့် မုန်တိုင်းတစ်ခုက ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီတွင် ထပ်မံရိုက်ခတ်ခဲ့သည်။
ယင်းမုန်တိုင်း၏ အမည်မှာ ‘ဥပါယ်တံမျဉ်’ဆိုသည့်ဇာတ်ကားပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကတွင် မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားအဖြစ် ပရိသတ်များက အသိအမှတ်ပြု ချီးကျူးခဲ့သည်။ ‘ဥပါယ်တံမျဉ်’ ဇာတ်ကားရုံတင်နေချိန်တွင် တောကားနှင့် မြို့ကားဆိုသည့် စကားမှာ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်များအကြား ရေပန်းစားခဲ့ပြီး အွန်လိုင်းတွင်လည်း ဗန်းစကားတစ်ခုအဖြစ် အသုံးများခဲ့သည်။
ဥပါယ်တံမျဉ်ဇာတ်ကားမှာ ပရိသတ်များအကြားတွင် ပေါက်ကားဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ငွေကြေးရရှိမှုအပိုင်းတွင်မူ ထင်သလောက် အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပေ။ ထိုအချိန်က ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် A Group၊ B Group ခွဲ ခြားပြသသည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေသည့်အ ပြင် ရုံရှင်၊ ကားရှင် စိတ်ကြိုက်ညှိနှိုင်းပြသမှုကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးထားရာတွင် ‘ဥပါယ်တံမျဉ်’ ဇာတ်ကားကို Juction နှင့် Mega ကသာ ရွေးချယ်၍ ပြသခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ရုံများကို A Group ၊ B Group ခွဲခြားပြသသည့်စနစ်အား ကျင့်သုံးရာတွင် တစ်နှစ်လျှင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၅၀ ကျော်ခန့် ပြသနိုင်ခဲ့သော်လည်း ရိုက်ကူးသူများပြားလာသည့်အတွက် ဆင်ဆာကျဇာတ်ကားများ များပြားလာသည့်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၊ ရုံပိုင်ရှင်များနှင့် ထုတ်လုပ်သူများက ညှိနှိုင်းပြီး ၂၀၁၈ မတ်လမှစတင်ကာ လက်ရှိ ရုံတင်စနစ်ကိုပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်း JCGV ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
‘‘လက်ရှိပြသရေးစနစ် ထွက်လာခဲ့တာက ရိုက်ထားပြီးသားဇာတ်ကားတွေ ပုံလာတာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရော၊ ရုံပိုင်ရှင်တွေရော၊ ထုတ်လုပ်သူတွေရော အားလုံးညှိနှိုင်းပြီး ဒီစနစ်ကိုစခဲ့တာ ၂၀၁၈ မတ်လက စတင်ခဲ့ပါ။ လက်ရှိအချိန်ထိ ကားပေါင်း ၃၀ နီးပါးပြပြီးသွားပြီ’’ဟု JCGV ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
လက်ရှိရုံတင်စနစ်တွင် တစ်လလျှင် အနည်းဆုံးဇာတ်ကားငါးကားကို ရွေးချယ် ပြသရခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမအပတ်တွင် ၂၀၁၆ ဆင်ဆာကျထားသည့် ဇာတ်ကားရှစ်ကားအတွင်းမှ ရုံရှင်များက ရွေးချယ်ပြသခြင်း၊ ဒု တိယအပတ်တွင် ရုံရှင်၊ ကားရှင် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြသခြင်း၊ တတိယအပတ်တွင် ၂၀၁၇ ဆင်ဆာကျပြီးသား ဇာတ်ကားရှစ်ကားအတွင်းမှ ရွေးချယ်ပြသခြင်း၊ စတုတ္ထအပတ်နှင့် ပဉ္စမအပတ်တွင် ရုံရှင်ကားရှင် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
‘‘လက်ရှိ ရုံတင်စနစ်အနေအထားက သွားရတာပြေလည်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး (ဥက္ကဋ္ဌ) အနေနဲ့ကလည်း သူသွားချင်တဲ့ မဖြစ်မနေပြပေးရမယ့် ဇာတ်ကားတွေအကုန်လုံးကို ပြပေးစေချင် တဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ၂၀၁၆ တစ်ကား၊ ၂၀၁၇ ကား ပြပေးမယ်။ ရုံရှင်စိတ်ကြိုက်ကလည်း သုံးကားထိ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်’’ဟု မင်္ဂလာကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပြုသည်။
လက်ရှိရုံတင်စနစ်ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများဘက်မှ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို အချိန်တိုအတွင်း ရုံတင်လာနိုင်သည့်အပြင် ထုတ်လုပ်ကုန်ကျစရိတ်မှာလည်း မြန်မြန်ပြန်ပေါ်လာနိုင်သည့်အတွက် ရုပ်ရှင်ရိုက် ကူးရေးလုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များပြားလာခဲ့ကြောင်း ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုသည်။
ထိုသို့ ထုတ်လုပ်သူများ များပြားလာရခြင်း၏ နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုက ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းကြောင့်လည်း ဖြစ် သည်။ ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ထားသည့် ဇာတ်ကားတစ်ကားသည် ရုံအားလုံးတွင် ပြသခွင့်ရပြီး ပေါက်ကားဖြစ်ခဲ့ပါက တစ်ပတ်အတွင်း သိန်းသောင်းချီ၍ ၀င်ငွေရရှိနိုင်သောအခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။
ထိုသို့ သိန်းသောင်းချီ ၀င်ငွေရှိသော်လည်း ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးတည်းက ရရှိခြင်း မဟုတ်ပေ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများပြသရာတွင် ၀င်ငွေခွဲဝေမှုအချိုးသည် ပထမ ရက်သတ္တပတ်တွင် ရုံပိုင်ရှင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း- ထုတ်လုပ်သူ ရာခိုင်နှုန်း ၅၀၊ ဒုတိယ ရက်သတ္တပတ်တွင် ရုံပိုင်ရှင် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း- ထုတ်လုပ်သူ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ တတိယ ရက်သတ္တပတ်တွင် ရုံအချို့၌ ရာခိုင်နှုန်း ၆၀- ထုတ်လုပ်သူ ရာခိုင်နှုန်း ၄၀ ဖြစ်ပြီး ရုံအချို့ကမူ ရုံရှင် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း- ထုတ်လုပ်သူ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ခွဲဝေ၍ ယူရခြင်းဖြစ် သည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်မင်းသားများဖြစ်ကြသည့် နေတိုး၊ မြင့်မြတ်၊ ပြေတီဦးတို့နှင့် ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမည် ဆိုပါက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားလျှင် သိန်း ၁၅၀၀ နှင့် ၂၀၀၀ ၀န်းကျင်အကြား ကုန်ကျစရိတ်ရှိပြီး အခြားသော သရုပ်ဆောင်များနှင့် ရိုက်ကူးမည်ဆိုပါက သိန်း ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်ခန့် ကုန်ကျစရိတ်ရှိကြောင်း ရုပ်ရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
‘‘အခု ဇာတ်ကားတစ်ကား ရိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုနေတိုးတို့၊ မြင့်မြတ်၊ ပြေတီတို့ ကားဆို ရင် သိန်း ၁၅၀၀-၂၀၀၀ ပတ်လည်လောက် လောက်ကုန်တယ်။ ကျန်တဲ့ မင်းသားတွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ သိန်း ၁၀၀၀ နဲ့ ၁၃၀၀ ပတ်လည် လောက်မှာ ရှိတယ်’’ဟု Myanmar Media7ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ တာဝန်ခံမန်နေဂျာ ဦးဆောင်းဦးက ပြောကြားသည်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ကြီးမားနေရခြင်းသည် အဓိက သရုပ်ဆောင်များဖြစ်ကြသည့် မင်းသား နှင့်မင်းသမီးတို့၏ သရုပ်ဆောင်ကြေး ကြီးမြင့်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး မင်းသားနှင့် မင်းသမီး နှစ်ဦးတည်းနှင့်ပင် သရုပ်ဆောင်ကြေးမှာ သိန်း ၁၀၀၀ ခန့် သုံးစွဲရကြောင်း ထုတ်လုပ်သူအချို့က ဆိုသည်။
ထိုသို့ အရင်းအနှီး ကြီးမားသည့်အတွက် ထုတ်လုပ်သူများမှာ ၎င်းတို့ ဇာတ်ကားကို အမြန်ဆုံး ရုံတင်၍ ငွေမြန်မြန်ပေါ်ရေးသည် အဓိကရည်မှန်းချက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ ရုံတင်စနစ်တွင် ၂၀၁၆ ဆင်ဆာကျ ထားသည့် ဇာတ်ကားများနှင့် ၂၀၁၇ ဆင် ဆာကျထားသည့် ဇာတ်ကားများကိုလည်း ရွေးချယ်ပြသရသည့်အပြင် ရုံရှင်ကားရှင် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြသခွင့်ကိုလည်း အနည်းဆုံး သုံးကားအထိ ခွင့်ပြုထားသည့်အတွက် ကောင်းမွန်သည့်စနစ်ဖြစ်ကြောင်း ရုံရှင်များက မှတ်ချက်ပြုသည်။
‘‘အမှန်ကတော့ ဒီစနစ်အတိုင်းက ရုံတွေအတွက်ရော၊ ထုတ်လုပ်သူ တွေအတွက်ရော ပရိသတ်တွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေပါ တယ်။ လက်ရှိမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပြသမှု ပိုင်းမှာ ဇာတ်ကားအရေအတွက် ပိုများလာတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ ဈေးကွက်အနေအထားကလည်း ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲ ပိုပြီးဦးတည်လာတယ်’’ဟု Mega ACE ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
သို့သော် ရုပ်ရှင်ဆိုသည့်အတိုင်း ထုတ်လုပ်သူများရင် ရှုပ်ရမည့် ပြဿနာက လက်ရှိရုံတင်စနစ် ပြောင်းလဲပြီး မကြာမီကာလတွင် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ပြဿနာက အခြားမဟုတ်၊ မင်္ဂလာကုမ္ပဏီအုပ်စုနှင့် Mega ACE & JCGV တို့၏ ဇာတ်ကားရွေးချယ်မှုအပိုင်းတွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ပြင်းထန်ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်သူများ၏ ၀င်ငွေမှာလည်း ပြသခွင့်ရသည့် ရုံပေါ်တွင်မူတည်၍ ကွာဟမှု ကြီးမားလာသည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ရုပ်ရှင်ရုံပေါင်း ၇၀ ကျော် ရှိသည့်အနက် ၂၄ ရုံအထိ မင်္ဂလာကုမ္ပဏီအုပ်စုက ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကျန်ရုံ ၅၀ ၀န်းကျင်ကို Mega ACE & JCGV ၊ Paradiso၊ Red Radiance နှင့် တစ်ဦးတည်း ပိုင်ရုံရှင်များက ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
မင်္ဂလာကုမ္ပဏီသည် ရုပ်ရှင်ပြသရေးလုပ်ငန်းကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ရုံ မှစတင်ကာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ပြသရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မှာ ၂၃ နှစ် သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပြည်၊ တောင်ငူ၊ ပဲခူး၊ မကွေး၊ မော်လမြိုင်နှင့် မုံရွာ စသည့်မြို့ကြီးများတွင် ရုပ်ရှင်ရုံပေါင်း ၂၄ ရုံတွင် ပိတ်ကားပေါင်း ၃၇ ခုဖြင့် ပြသလျက်ရှိသည်။
ရုပ်ရှင်ရုံအများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွင် မင်္ဂလာကုမ္ပဏီ အုပ်စုပြီးလျှင် Mega ACE & JCGV က ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုပေါင်းက ၁၄ ရုံသာ ပိုင်ဆိုင်သော်လည်း အဓိကမြို့ကြီးများတွင် ရုံပိုင်ဆိုင်မှုများသောကြောင့် လက်ရှိရုံတင်စနစ်၏ ဇာတ်ကားရွေးချယ်ရာမှာ ရွေးချယ်ခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ပြဿနာက အဲဒီမှာ စသည်။ လက်ရှိ ရုံတင်စနစ်အရ ပထမအပတ်တွင် ၂၀၁၆ ဆင်ဆာကျထားသည့် ဇာတ်ကားရှစ်ကားထဲမှ မင်္ဂလာနှင့် Mega ACE & JCGV တို့က ရွေးပြီးပြရသည့် အတွက် ရွေးချယ်မှုတူညီပါက ရုံအားလုံးတွင် တစ်ပြိုင်တည်း ပြသခွင့်ရသောကြောင့် ပေါက်ကားဖြစ်လျှင် အကျိုးအမြတ်များနိုင်သည်။ ပေါက်ကားမဖြစ်သော်လည်း ရုံအားလုံးတွင် ပြသရသည့်အတွက် အရှုံးနည်းပြီး အရင်းပြန်ရနိုင်သည်။ တတိယအပတ် ၂၀၁၇ ဆင်ဆာကျပြီးသားဇာတ်ကားများ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်။
သို့သော် အဓိကပြဿနာဖြစ်သည်က ရုံရှင်၊ ကားရှင် စိတ်ကြိုက်ရွေး၍ ပြရသည့် တစ်လ အနည်းဆုံးသုံးကားတွင် မင်္ဂလာနှင့် Mega ACE & JCGV တို့ ရွေးချယ်မှုက မတူညီသည့်အတွက် အပြိုင်နှစ်ကားပြသည့် ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတတ်သည်။ လက်ရှိ ရုံတင်စနစ်ဖြင့်ပြသခဲ့သည့် ငါးလအတွင်း ရုံရှင်၊ ကားရှင် စိတ်ကြိုက်ရွေး၍ပြရာတွင် ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့သည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ရှိခဲ့ သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဒါရိုက်တာ ခရစ်(စ)တီးနားခီ ရိုက်ကူးသည့် မုဒြာခေါ်သံဇာတ်ကားကို Mega ACE & JCGV တို့က ရွေးချယ်၍ ပြသချိန်တွင် မင်္ဂလာရုံအုပ်စုများတွင် ဒါရိုက်တာဝိုင်း ရိုက်ကူးသည့် ရွှေကြာဇာတ်ကားကို အပြိုင်ပြသခဲ့သည်။
ဒါရိုက်တာ ခရစ်(စ)တီးနားခီ၏ ပထမကားဖြစ်သည့် ဥပါယ်တံမျဉ်သည် နာမည်ကြီး၍ ပေါက်ကားဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဒုတိယကားဖြစ်သည့် မုဒြာခေါ်သံဇာတ်ကားကို မင်္ဂလာဘက်မှ ရွေးချယ်ခြင်းမရှိဘဲ ရွှေကြာ ဇာတ်ကားကိုသာ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်၍ အပြိုင်ပြခဲ့သည်။
ထိုသို့ပြသရာတွင် အပြိုင်နှစ်ကားလုံး ပေါက်ကားဖြစ်သွားပါက မင်္ဂလာဘက်ခြမ်းတွင် ပြသသည့် ဇာတ်ကားမှာ ၀င်ငွေပိုရကြောင်း သိရသည်။ မင်္ဂလာကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ရုံများမှာ နေရာကျယ်ဝန်းသည့်အပြင် ရုံအရေအတွက်မှာလည်း Mega ACE & JCGV ထက် ပိုများသောကြောင့် ပေါက်ကားချင်းတူသော်လည်း ရရှိသည့်ဝင်ငွေမှာ သုံးချိုးတစ်ချိုးခန့်ကွာသည်ဟု ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးများက ဆိုသည်။ ထို့ပြင် မင်္ဂလာပိုင် ရုံများမှာ လူနေထူထပ်သည့် နယ်မြို့များတွင် ရှိခြင်းကလည်း ၀င်ငွေအရ ပိုသာစေသည့် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၀င်ငွေအများဆုံးရသည့် ရုပ်ရှင်ရုံမှာ သမ္မတရုံဖြစ်ပြီး ရုံပြည့်ဝင်ပါက တစ်ပွဲလျှင် ၁၉ သိန်းကျော်ခန့်ရရှိကြောင်း သိရသည်။ Mega ACE & JCGV တို့၏ရုံများမှာမူ ရုံအပြည့်ဝင်ပါက တစ်ပွဲလျှင် ရှစ် သိန်းကျော်သာရရှိသည့်အတွက် ၀င်ငွေမှာ သုံးချိုးတစ်ချိုးခန့် ကွာနေခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် မင်္ဂလာနှင့် Mega ACE & JCGV တို့က ရွေးချယ်ပြသရာတွင် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် လမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်း ဖြစ်နေသည်။ မင်္ဂလာဘက်ခြမ်းတွင် ပြသချင်သည်ဆိုပါက အချိန်ကြာသော်လည်း ၀င်ငွေပိုရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Mega ACE & JCGV ဘက်ခြမ်းတွင် ပြသမည်ဆိုပါက အချိန်သက်သာသော်လည်း ၀င်ငွေနည်းမည် ဖြစ်သည်။
အချို့သောထုတ်လုပ်သူများက ရင်းနှီးထားသည့် ငွေအမြန်ပေါ်လိုခြင်း၊ မိမိတို့ ဇာတ်ကားမှာ အချိန်ကာလနှင့် လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်စေရန် ပြသလိုခြင်းများသောကြောင့် Mega ACE & JCGV ဘက်ခြမ်း တွင် ပြသမှုများရှိခဲ့သော်လည်း ၀င်ငွေမှာ မင်္ဂလာဘက်ခြမ်းလောက် မရရှိပေ။ ၀င်ငွေ ကွာဟမှု ကြီးမားလာသည့်အတွက် ထုတ်လုပ်သူအများစုမှာ မင်္ဂလာဘက်ခြမ်းတွင်သာ ပြသလိုသည့်သူများလည်း ရှိခဲ့သည်။
ထို့ပြင် Mega ACE & JCGV အုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြသသည့် ထုတ်လုပ်ရေးများအနေဖြင့် မင်္ဂလာအုပ်စုဘက်တွင်လည်း ရုံအချို့တွင် ပြသပေးရန် တောင်းဆိုမှုများရှိခဲ့သည်။ မင်္ဂလာအုပ်စုအနေဖြင့် အချို့သော ဇာတ်ကားများတွင် ရုံအချို့ပေးခြင်းနှင့် အချို့သောရုံများတွင် ပွဲစဉ်အချို့ ပြသပေးမှု များရှိသော်လည်း ယင်းအခွင့်အရေးကို ရရှိသည့် ဇာတ်ကားမှာ နည်းပါးလွန်းခဲ့ကြောင်း ထုတ်လုပ်သူများက ဆိုသည်။
‘‘ကျွန်တော့်ရဲ့ ဥပါဒါန် ဇာတ်ကားတုန်းက ရုံတင်ပြသခွင့်ရရှိဖို့ကို တစ်နှစ်ကျော်လောက် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက ကိုယ့်ဘာသာ၊ သာသနာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်ကားပါ။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံ အများစုမှာ ပြသခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ တချို့ရုံတွေက နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ပြပေးကြပေမဲ့ ၀င်ငွေအချိုးကတော့ နည်းသွားတာပေါ့လေ။ ရုပ်ရှင်ရုံအများကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်္ဂလာကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ တကယ်အရည်အသွေးရှိတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတွေအပေါ်မှာ ရုံတချို့တော့ပေးပြီး ပြသသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ အခုလက်ရှိမှာက ရုပ်ရှင်ရုံပိုင် ရှင်တွေအချင်းချင်း အားပြိုင်မှုက ကျွန်တော်တို့ အနုပညာရှင်တွေကိုပဲ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေပါ တယ်။ ရှေ့ဇာတ်ကားမှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အရင်းပြန်ရဖို့တောင် မနည်းကြီးကြိုးစားထားရတာဖြစ်လို့ နောက်ဇာတ်ကား ဆက်ရိုက်ဖို့ကို အတော်လေးအားယူပြီး စဉ်းစားနေရပါတယ်’’ ဟု ဥပါဒါန်ဇာတ်ကား၏ ထုတ်လုပ်သူ ဒါရိုက်တာဗန်းကြီးက ၎င်း၏အတွေ့အကြုံကို ပြောပြသည်။
လက်ရှိ ရုံတင်စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ‘‘အခု လက်ရှိရုံတင်စနစ်မှာ ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ ဇာတ်ကားရွေးချယ်မှုကို အဓိကပြုလုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှာ တစ်ခုကတော့ သူတို့ဘက်က ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကို တခြားတစ်ဖက်က ရုံတွေမှာပြရင်လည်း ပေးပြတယ်။ တစ်ဖက်ရုံအုပ်စုကတော့ သူ့ဘက်မှာ မပြတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ဟိုဘက်ကို မသွားရဘူးဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ထုတ်လုပ်ရေးအချို့နဲ့ မင်္ဂလာအုပ်စုက Group တွေ ဖွဲ့ထားတာလည်း ရှိတယ်လို့ ကြားတယ်။ မင်္ဂလာအုပ်စု အနေနဲ့ကလည်း ဇာတ်ကားတွေအားလုံးကို ပြမပေးနိုင်ဘူးလေ။ ဒါကို သူ့ဘက်မှာ မပြ ပေးတဲ့ဇာတ်ကားတွေကို တခြားတစ်ဖက်မှာ သွားပြီးပြရတယ်။ ဇာတ်ကားတွေမှာကလည်း အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီး ပြရတာတွေရှိတယ်လေ။ အဲဒီလိုပြသတာတွေအပေါ်မှာပဲ မင်္ဂလာကုမ္ပဏီဘက် မကြည်ဖြူဘူးဆိုတဲ့ သဘောတွေရှိတယ်။ လက်ရှိမှာ ရုပ်ရှင်ရုံအုပ်စုတွေကွဲနေသလို ထုတ်လုပ်သူ တွေဘက်မှာလည်း အုပ်စုတွေ ကွဲကုန်ကြတာရှိတယ်။ တချို့ထုတ်လုပ်ရေးတွေဆိုရင် အချင်းချင်း ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရှိခဲ့ကြတာကနေ ဆက်ဆံရေးတွေ သိပ်မကောင်းတော့တာတွေရှိတယ်’’ ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။
ထို့အတူပင် မင်္ဂလာအုပ်စုမှ ရွေးချယ်ပြသသည့် ဇာတ်ကားများအား Mega ACE & JCGV ရုံအုပ်စုများမှ ပြသရန်ကမ်းလှမ်းမှုများရှိခဲ့သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူများက ပြသရန် ငြင်းဆိုမှုများရှိခဲ့သည်ဟုလည်း သိရ သည်။
‘‘ရုံရှင် ကားရှင်စိတ်ကြိုက်မှာကတော့ ကိုယ့်ဘက်က ပြသချင်ပေမဲ့ ထုတ်လုပ်သူဘက်က မပြချင်ဘူးဆိုရင်လည်း အစ်မတို့တွေ ပြလို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ တချို့ဇာတ်ကားတွေမှာတော့ ရုံရှင်စိတ်ကြိုက် ဇာတ်ကားတွေမှာတော့ အစ်မတို့အနေနဲ့ တစ်ဘက်က ရုံအုပ်စုနဲ့ ညှိနှိုင်းလို့ရရင်တော့ တူနိုင်ပါတယ်။ ရုံရှင်စိတ်ကြိုက်ကားတွေထဲမှာမှ ထုတ်လုပ်သူတွေဘက်က နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ပြဖို့အတွက် ကမ်းလှမ်းတာတွေ၊ စာတင်တာ တွေရှိတဲ့အတွက် နှစ်ဘက်စလုံးမှာ ပြသပေးတဲ့ ဇာတ်ကားတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ Reflection ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနဲ့ ဒုဋ္ဌ၀တီကိုလွန်၍ ဇာတ်ကားတွေမှာတော့ နှစ်ဖက်စလုံး တစ်ပြိုင်နက်ပြခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။အစ်မတို့ ရုံအုပ်စုတွေအနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်ဘက်ကရွေးချယ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကို တစ် ဖက်က ပြမယ်ဆိုရင်လည်း ကန့်ကွက်တာမျိုး တားဆီးတာမျိုး မရှိပါဘူး။ တစ်ဖက်က ရုံရှင် တွေ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ရင် ပြလို့ရပါတယ်။ အဲဒါက ထုတ်လုပ်သူရဲ့ အခွင့်အရေးပါ’’ ဟု JCGV ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
မင်္ဂလာကုမ္ပဏီဘက်သို့ ရုံတင်စနစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုရှိနေသော်လည်း ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် မင်္ဂလာဘက်မှတောင်းဆိုသော ၀င်ငွေအချိုးကို မပြင်လိုသည့်အတွက် စွပ်စွဲခံရမှုများရှိလာကြောင်း မင်္ဂလာကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
‘‘အရင်တုန်းကတော့ မင်္ဂလာကနေပြီး ဦးဆုံးရုံတင်ပြီး ပြသခဲ့တယ်။ ခွဲဝေပေးတဲ့ အချိုးကိုလည်း ညီတူညီမျှပေးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရုံသစ်တွေပေါ်လာပြီး ထိပ်တိုက်ပြချင်တဲ့ ရုံတွဲတွေ ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီအတွက် မင်္ဂလာအုပ်စုအနေနဲ့ ဘယ်ရုံကိုပြပါ၊ ဘယ်ရုံကိုမပြပါနဲ့လို့ မပြောဘူး။ ဈေးကွက်သဘောအရ ဈေးကွက်က ပျံ့သွားတဲ့ အတွက် ချိုးရတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကို နည်းနည်းလျှော့ယူပါဆိုတဲ့အခါမှာတော့ ထုတ်လုပ်သူတွေက လျှော့မယူချင်ကြဘူး။ သူတို့က အပြည့်အတိုင်း ယူချင်တယ်။ အဲဒီအတွက် တစ်ဖက်ရုံတွဲတွေကို သူတို့မတင်ဘူး၊ မင်္ဂလာမှာပဲ တင်မယ်၊ ဒီအချိုးကို အပြည့်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီး သူတို့ဘက်ကစပြီး ပြောလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ တစ်ဖက်ကိုပြပါ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ တစ်ဖက်မှာ ၀င်သွားတဲ့အတွက် ဒီဘက်မှာရနေတဲ့ ၀င်ငွေအတိုင်းအတာက လျော့သွားတဲ့အတွက် ဒီအချိုးလေးတော့ ပြင်ပေးပါဆိုတာကို သူတို့ ၀င်ငွေ ဝေစုအချိုး မပြင်ချင်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့က အပြည့်အတိုင်းလိုချင်တယ်။ ဟိုဘက်ကိုမပြနဲ့ဆို မပြတော့ဘူးဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီမှာ မင်္ဂလာက အကျပ်ကိုင်လို့ သူတို့က မပြရပါဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်။ တကယ်တော့ ဒါက ဈေးကွက်အနေအထားကို နားမလည်လို့ဖြစ်တာလေ။ ဈေးကွက်မှာ ဦးဆုံးရောင်းရတုန်းကတော့ သူ့ကို ဈေးပိုပေးထားတယ်။ ဦးဆုံးမရောင်းရတဲ့အခါ ဟိုဘက်ဒီဘက် ထိပ်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဈေးကွက်ဝေစု လျော့လာတယ်။ အဲဒီတော့ ၀င်ငွေအချိုးပြင်ဖို့ပြောတာ မပြင်ဘဲ ဟိုဘက် မပြဘူးဖြစ်လာတာလေ။ တကယ်တော့ ဒါ က ထုတ်လုပ်သူရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါပဲ’’ ဟု မင်္ဂလာကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
၀င်ငွေအပေါ်မူတည်၍ ထုတ်လုပ်ရေးအချို့မှ လက်ရှိပြသရေးစနစ်အတိုင်း ရွေး ချယ်ခံရသည့် ၎င်းတို့ ဇာတ်ကားအချို့ကို အခြားရုံအုပ်စုတွင် ပြသရန် ငြင်းဆန်မှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိရုံတင်စနစ်အရ ဆင်ဆာတန်းစီဇာတ်ကားများဖြစ်သည့် အောင်သီရိထုတ်လုပ်ရေးမှ ‘ဟီးဟီးဟားဟား’ ဇာတ်ကားနှင့် လာဗင်ဒါထုတ်လုပ်ရေးမှ ‘ဓားငပြူး’ ဇာတ်ကားတို့မှာ Mega ACE & JCGV ရုံအုပ်စုများတွင် ပြသရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘အခုလက်ရှိ ရုံတင်စနစ်မှာ ပြသဖို့ရှိတဲ့ ဇာတ်ကားအရေအတွက်က ၂၄၀ ကျော်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့ ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း ဒီဇာတ်ကားတွေအားလုံး ရုံတင်ပြသ နိုင်ရမယ်၊ မြန်ဆန်စွာ ရုံတင်နိုင်ရမယ်ပေါ့။ အဲဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ အောင်သီရိ ထုတ်လုပ်ရေးအနေနဲ့ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေနဲ့ တန်းစီစနစ်ထဲကနေရွေးချယ်ခံရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ‘ဟီးဟီးဟားဟား’ ဇာတ်ကားကို ကျန်တဲ့ဇာတ်ကားတွေကို ရုံအစုံ မယူတော့ဘဲနဲ့ တစ်ခြမ်းကိုပဲ ယူလိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ခြမ်းက နောက်တစ်ကားပြသနိုင်ဖို့အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ တန်းစီစနစ်ထဲမှာပါရင် ဇာတ်ကားတွေအနေနဲ့ ရုံအစုံမှာ မဖြစ်မနေပြရမယ်ဆိုတဲ့ မူတော့ မရှိဘူး။ ရုံတွေအနေနဲ့လည်း တန်းစီစနစ်ထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းကို ပြတာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ဖက်က ရွေးတာတစ်ကား နောက်တစ်ဖက်က ရွေးတာတစ်ကား မတူပါဘူး။ ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ကလည်း တန်းစီစနစ်ထဲမှာပါတိုင်း ရုံအားလုံးမှာပြသရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လုပ်သူဘက်ကလည်း ရုံတိုင်းကို မပြဘူးဆိုတာက နောက်တစ်ဖက်ကနေ တစ်ကားတက်လို့ ရအောင်လို့ပါ။ များသောအားဖြင့်က လည်း ဆင်ဆာနံပါတ်အရ တန်းစီထားတဲ့ ကားတွေဆိုရင် ၂၀၁၆ ဆိုရင် နှစ်ကား၊ ၂၀၁၇ ဆိုရင်လည်း နှစ်ကားတိုက်နေကျပဲ။ ကျွန်တော်တို့အလှည့်ကျမှ နှစ်ဖက်လုံးကတူပြီး တစ်ကားတည်းဖြစ်နေတာ။ ဒီလို ငြင်းတယ်ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ်ပါပဲ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ရုံရှင်တွေကလည်း ရှစ်ကားထဲကနေ ကြိုက်တာကိုရွေးပြကြတဲ့ အခွင့်အရေးရှိသလိုပဲ၊ ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့၊ ကိုယ်ပြချင်တဲ့ရုံကို ပြန်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ အ ခွင့်အရေးတော့ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်’’ ဟု အောင်သီရိရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ဒေါက်တာကျော်ကျော်ဦးက ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၆ ရက်ကကျင်းပသော ရုံရက်ချိတ် အစည်းအဝေးတွင် ထုတ်လုပ်ရေးများမှ ပြသရန် ဆန္ဒမရှိသော ရုံအုပ်စုများကို စာတင်ရန် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် ဇူလိုင် ၃၀ တွင် ယင်းထုတ်ပြန်ချက်အား ခေတ္တဆိုင်းငံ့သည့် စာကို ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့အတူပင် ထုတ်လုပ်သူများကြားတွင်လည်း အမျိုးမျိုးသော ဝေဖန်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်သူအခွင့်အရေးဆိုသည့် စကားသံများလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအကြားတွင် သဘောထား ကွဲလွဲမှုများလည်း ရှိလာသည်။
‘‘အခုလက်ရှိ ရုံတင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့က ဘာမှ ပြောလို့မရသေးဘူး၊ ဘာမှလည်း လုပ်လို့မရသေးဘူး။ အခုက ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ရုံတင်စနစ် ပြဿနာတက်နေရတဲ့ကြားထဲမှာမှ ရုံရှင်တွေရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုက တစ်ခါဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးတို့အနုပညာသမားတွေပဲ ကြားညပ်တာပဲ။ နောက်ဆုံးကျရင်လည်း အနုပညာသမားတွေပဲ အလုပ်လက်မဲ့တွေ ဖြစ်ကုန်မှာပဲ။ ရှင်းတယ်။ ဒါကိုလည်း ဘယ်သူကမှ မဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူး။ ဦးတို့လည်း မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ ဒါကလည်း ခေတ်အဆက် ဆက်ဖြစ်လာတာကိုး။ ပုံစံတစ်ခုကို ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် နစ်နာတာရှိသလို ပိုကောင်းတာတွေလည်း ရှိတယ်။ စစချင်းကတော့ ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် နစ်နာတာရှိမှာပဲ။ အဲဒါကို ဘယ်သူကမှ မခံစားသရွေ့ကတော့ ဦးတို့ အနုပညာရှင်တွေကပဲ အနစ်နာခံပြီး သွားရမှာပဲ။ ဦးတို့တွေက အနစ်နာခံပြီး သွားတဲ့အခါကျတော့လည်း စနစ်က ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ အလုပ်မရှိကြတော့ဘဲ ဖြစ်သွားမယ်။ ရုံပြိုင်ဆိုင်မှုတွေက မပြီးသေးဘူး။ ဘယ်တော့မှ ပြီးမလဲ မသိဘူး။ အဲဒီထဲမှာ ထုတ်လုပ်သူတွေက မညီမညွတ်နဲ့ ဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဟာကြီးက ဒီအတိုင်းပဲ ရွေ့သွားမယ်။ ရုံပြိုင်ဆိုင်မှုလည်း ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီစနစ်လည်း ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး’’ ဟု ဒါရိုက်တာကိုဇော် (အရုဏ်ဦး) က သုံးသပ်သည်။
ထုတ်လုပ်သူအများစုကလည်း လက်ရှိ ရုံတင်စနစ်မှာပင် ရုံအုပ်စုအချိုးအား ကွာဟမှုနည်းရန် မျှော်လင့်နေကြသည်။
‘‘ရုံပိုင်ရှင်တွေချင်း မာနပြိုင်၊ စီးပွားပြိုင်နေကြတာက ပရိသတ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ရုပ်ရှင်လောကအတွက်တော့ ပြန်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်’’ ဟု ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး က ဆိုသည်။
လက်ရှိရုံတင်စနစ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ် ၉ ရက်က စတင်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့သည့်အတွက် ယခုဆိုလျှင် အချိန်ငါးလကျော်ခန့်ကြာ ပြီဖြစ်သည်။ ရုံတင်စနစ်စတင်ပြောင်းလဲသည့် မတ် ၉ ရက်မှ သြဂုတ် ၁၇ ရက်အထိ ဇာတ်ကားပေါင်း ၃၀ ကျော် ရုံတင်ပြသခဲ့သည်။
ယင်းဇာတ်ကား ၃၀ ကျော်အနက် ပေါကားဟု လူပြောများသည့် ဟာသကားမှာ ထက်ဝက်နီးပါး ရုံတင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ယခု ငါးလအတွင်း အချို့သောပေါကား (ဟာသကား) များ၏၀င်ငွေသည် သိန်းသောင်းနှင့်ချီ၍ရသည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိ ရုံတင်စနစ်အရ ရုံအုပ်စုများ၏ ပြသခဲ့သော ဇာတ်ကားများကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ရုံရှင်များဘက်မှ ရွေးချယ်မှု ထက်ဝက် ခန့်မှာ ပေါကားများဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရ သည်။
ငါးလအတွင်း ဘာကြောင့် ပေါကား (ဟာသကား) များကို ထက်ဝက်ခန့်မျှရွေးချယ် ၍ ရုံရှင်များက ပြသခဲ့သနည်း။ အဓိကမှာ ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းနှင့် ပရိသတ်အကြိုက် နာမည်ကြီး မင်းသား၊ မင်းသမီးများ ပါဝင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ရုပ်ရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်းက သုံးသပ်မှုများရှိနေသည်။
‘‘ရုံရှင်တွေဘက်က လက်ရှိအချိန်မှာ အနုပညာထက် ဘယ်သူက ပေါ်ပြူလာအဖြစ် ဆုံးလဲ၊ ဘယ်သူ့ဆိုရင် ငါတို့ပိုက်ဆံပြန်ရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ ဦးတည်ပြီးတွက်တယ်။ ဒါကလည်း သူတို့မှာ အပြစ်မရှိပါဘူး။ စီးပွားရေး သမားကတော့ စီးပွားရေးအရ တွက်ချက်မှာပဲလေ’’ ဟု ဒါရိုက်တာ ခရစ်(စ)တီးနားခီက သုံးသပ်သည်။
လက်ရှိတွင် လူငယ်ဒါရိုက်တာအချို့က အစဉ်အလာဟောင်းမှ ဖောက်ထွက်သည့် ဇာတ်ကားများကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့ကြသော်လည်း ၀င်ငွေရရှိမှုတွင် အချို့ ပေါကား (ဟာသကား) များ၏၀င်ငွေကို မမီသည့်အ တွက် နောက်ထပ်ဇာတ်ကားကောင်းများ ရိုက်ထုတ်ရန် မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေကြသည်ဟု ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိနေသည်။
ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းသည် လက်ရှိရုံတင်စနစ်ကြောင့်လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ လူငယ်အချို့၏ ဖောက်ထွက်လာသည့် ဇာတ်ကားများကို ရုံအားလုံးတွင် ပြသခွင့်မရရှိခဲ့ဘဲ Mega ACE & JCGV ဘက်အခြမ်းတွင်သာ ပြသခွင့်ရရှိခဲ့သောကြောင့် ၀င်ငွေအရ နည်းပါးသွားခဲ့သည်။
‘‘လက်ရှိအနေအထားက ငါတို့မှာ ရုံဘယ်နှရုံရှိတယ်။ ငါတို့ ပြပေးမှရမယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းမာမာနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ စနစ်ကြီးကလည်း ရှိနေသေးတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ယနေ့အထိ ဘယ်လိုပဲ ယုံကြည်တယ်ပြောပြော ဒီအသစ်ကိုကြည့်ပေမယ့် နောက်အသစ်ကိုတော့ ကြည့်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိတ်ကလည်း ရှိနေပြန်ရော။ အဲဒီကြားထဲမှာမှ အနုပညာရှင်အသစ်တွေအတွက် နေရာတစ်ခုက ကျိန်းသေရသွားခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ဘာက ကြောက်စရာကောင်းလဲ ဆိုတော့ လူငယ်တွေက အနုပညာတစ်ခုကိုပဲ ကြည့်ပြီး ဖန်တီးဖို့ ကြောက်လာလိမ့်မယ်။ ဒီဈေးကွက်ကိုမသိရင် ပြခွင့်မရှိဘူး။ ပြခွင့်မရှိရင် ပိုက်ဆံထုတ်ပေးတဲ့သူကို ပိုက်ဆံပြန် ရှာမပေးနိုင်ဘူး။ မပေါက်တဲ့အတွက် သူကိုယ်တိုင်ကလည်း နာမည်တစ်ခုမရတဲ့အတွက် စားဝတ်နေရေး ထိခိုက်လာမယ်ဆိုတာကို သိလာမယ်။ အဲဒီတော့ သူကိုယ်တိုင်က ဈေး ကွက်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုပဲ အာရုံစိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲဒီအခါ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်က ကောင်းသွားမယ့်ဟာကနေ တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ နောက်ဆွဲမယ့်အရာတွေလည်း ပေါ် လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်’’ ဟု ဒါရိုက်တာခရစ် (စ) တီးနားခီက ဆိုသည်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ပရိသတ်အားပေးမှုများပြားလာခြင်း၊ ရုံအရေအတွက်များပြားလာခြင်းတို့ အပြင် ပြသနိုင်သည့် ဇာတ်ကားအရေအတွက်လည်း များပြားလာခဲ့ပြီး ဦးမော့လာနိုင်ခဲ့ သည်။ ထို့အတူပင် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အပေါ် ပရိသတ်များ၏ စိတ်ဝင်စားအားပေးမှုနှင့်အတူ ဝေဖန်မှုများ အထူးသဖြင့် မြန်မာပေါကား ဆိုသည့် ဝေဖန်မှုများ ပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများအတွက်မူ ပေါကား (ဟာသကား)အများစုက ၀င်ငွေအများအပြားရရှိရန် မျှော်လင့်နိုင်သည့်အနေအထားကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်များက ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ၀င်ငွေအရများသည့် မင်္ဂလာဘက်ခြမ်းတွင် ပေါကား (ဟာသကား) အချို့ ၏ ၀င်ငွေမှာ သုံးပတ်အတွင်း သိန်းသောင်းနှင့် ချီ၍ရသည့်အတွက် ထုတ်လုပ်သူအများစုမှာ စီးပွားရေးအရ ငွေရလွယ်သည့် ပရိသတ်အကြိုက် နာမည်ကြီးမင်းသား၊ မင်းသမီးများနှင့် ဟာသကားများကိုရိုက်ကူးရန် ဦးစားပေးစဉ်း စားလာသည့်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်တော်လှန်ရေးမှာ မျှော်တော်ယောင်ဘ၀က မလွတ်မြောက်နိုင်သေးကြောင်း သုံးသပ်လျက်ရှိကြသည်။
‘‘ပေါကားဆိုတာကလည်း ပရိသတ်ရှိလို့လည်း ရိုက်နေကြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုဇာတ်ကားမျိုးတွေကိုပဲ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်များခဲ့လို့ ဒီလို ပေါကားတွေက တောက်လျှောက်ရိုက်လာတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေ အမာခံရှိလို့လည်း ရုံတွေကတင်တာပေါ့။ ပိုက်ဆံရတဲ့ကားကို တင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် ပိုက်ဆံရမယ့်ကား တွေချည်းပဲ တင်နေလို့တော့ မဖြစ်သေးဘူး။ တကယ်တမ်း ခီတို့လိုမျိုး သေသေချာချာရိုက်ထားတဲ့ ကားမျိုးတွေကိုလည်း နေရာပေးမှ သာလျှင်၊ မျှမှသာလျှင် ရုပ်ရှင်လောကက တိုးတက်မှာ။ ရုံရှင်တွေကြောင့်မိုလို့လည်း အဲဒီ လိုဖြစ်ရတာ။ ပရိသတ်တွေကြောင့်မိုလို့လည်း အဲဒီလို ဖြစ်နေရတာ။ အဲဒီတော့ ရုပ်ရှင်လောကကြီးက မတိုးတက်တော့ဘူးပေါ့’’ ဟု Myanmar Media7ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
Posted in Features, HeadlineTagged ရုပ်ရှင်LeaveaComment on ပေါကားနှင့် မောရသည့် ရုံတင်စနစ်
Posted in EntertainmentTagged ရုပ်ရှင်LeaveaComment on သရုပ်ဆောင်မေမြင့်မိုရ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted in EntertainmentTagged ရုပ်ရှင်LeaveaComment on အကယ်ဒမီ ခိုင်သင်းကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on August 1, 2018 August 1, 2018 by စုမှူးနိုင်
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် Oshin ဇာတ်လမ်းတွဲကို သြဂုတ် ၆ ရက်မှစတင်ကာ mntv ရုပ်သံလိုင်း၌ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပြသမည်ဟု သိရသည်။
“အရင်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ Oshin ဇာတ်လမ်းတွဲ ထုတ်လွှင့်ပြသစဉ်က ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း ကျွန်မအနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု နောက်တစ်ခါ ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပြသပေးရတာကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Oshin ဇာတ်လမ်းတွဲကိုကြည့်ရင်း အမျိုးမျိုးသော ခံစားချက်တွေ ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှအရေး အကြီးဆုံးကတော့ မိသားစုရဲ့နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာတရားကို အားလုံးကပိုပြီး ခံစားမိမယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အမျိုးသမီးတစ် ယောက်ရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ မဆုတ်မနစ် သူကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဇွဲလုံ့လတွေ၊ စိတ်ထားတွေက ဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်တဲ့သူတွေအနေ နဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု Oshin ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ အိုးရှင်း၏ငယ်ဘ၀ကို သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဂျပန်မင်း သမီး Kobayashi Ayako က ဆိုသည်။
ဂျပန်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ Oshin ကို mntv ရုပ်သံ လိုင်းတွင်သြဂုတ် ၆ ရက်မှ စတင် ကာ အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့မှ သောကြာနေ့အထိ နေ့စဉ် ည ၈ နာရီတွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုများကို အပတ်စဉ် စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့ များ၏ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်၌ တင် ဆက်သွားမည်ဟု သိရသည်။ ထို့ပြင် OShin ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် Oshin & Me အစီအစဉ်ကို သြဂုတ် ၄ ရက် (စနေနေ့)နှင့် သြဂုတ် ၅ ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)များ၏ ည ၉ နာရီ်၌ တင်ဆက်သွားမည်ဟု သိရသည်။
Posted in EntertainmentTagged ရုပ်ရှင်LeaveaComment on ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် Oshin ဇာတ်လမ်းတွဲကို သြဂုတ် ၆ ရက်မှစတင်ကာ MNTV ရုပ်သံလိုင်း၌ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပြသမည်
Posted on August 1, 2018 by လင်းလင်းခိုင်၊ စုမှူးနိုင်
ရုံတင်ပြသလျက်ရှိသည့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဇာတ်ကားတွင် အလင်းရောင်အား တွေ့ မြင်နေကျ ဇာတ်ရုပ်မျိုးမှကွဲထွက်ကာ ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်ဖြင့် ထူးခြားစွာ တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံကာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ဖွယ်ဇာတ်ကားအဖြစ် ဖန်တီးထားသည့် ယင်းဇာတ်ကားတွင် မုန်းတီးစရာ၊ ယုတ်မာရက်စက်သူတစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ထားသည့် သရုပ်ဆောင်အလင်းရောင် နှင့်တွေ့ဆုံ၍ ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရသည်များ၊ အခက်အခဲများနှင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့် အနုပညာလုပ်ငန်းများအား မေးမြန်းဖြစ် ခဲ့သည်။
မေး- ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဇာတ်ကားမှာပါဝင်တဲ့ နောင်နောင်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်အတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာကိုလည်း ပြောပြပေးပါဦး
ဖြေ- ဒီဇာတ်ကားက ရွှေကြာဇာတ်ကားရိုက်ပြီး သင်္ကြန်တစ်လလုံး နားနေတဲ့အချိန်ကတည်းက ဒီဇာတ်ကားအတွက် လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်ဖြစ်တယ်။ မေလမှာစပြီးရိုက်ကူးတဲ့ အချိန်မှာလည်း ဇာတ်ကားမရိုက်ခင် မေမြို့မှာ ဒီဇာတ်ကားအတွက် ထရိန်နင်ဝင်ပြီး အိုက်တင်ပိုင်းတွေလေ့ကျင့်တယ်။ တခြားအ၀တ်အစား၊ မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်ကစ အဆင့်တိုင်းကို သေချာညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး- ဒီဇာတ်ကားက ထိတ်လန့်ဖို့ကောင်းတဲ့ သရဲကားဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင်လည်းဗီလိန်ဖြစ်တော့ ရိုက်ကူးတဲ့အခါ အခက်အခဲရှိလား။
ဖြေ-မရိုက်ခင်မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်က ကျွန်တော်တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး။ အဓိကတော့ မျက်လုံးမှာပေါ်လွင်အောင်လုပ်ရတာ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့စိတ်၊ သူများကိုဒုက္ခပေးချင်တဲ့ စိတ်တွေကို မျက်လုံးမှာပေါ်လွင်အောင် ကြိုးစားရတာပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး အကျင့်ယုတ်နိုင်အောင်လည်း စိတ်ထဲမှာကို ဆဲဆဲပြီး စိတ်ကိုအကျင့်ယုတ်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်အောင် အဲဒီကားရိုက်နေတုန်းမှာ ထားခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်ဒုက္ခပေးမယ့်သူတွေကိုလည်း တွေ့တာနဲ့ကို ဒုက္ခပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးဖြစ်အောင် တစ်ချိန်လုံးသွင်းထားရတာ။ ကိုကျော်ထက်အောင်ကိုဆိုရင် တွေ့တာနဲ့ သူ့ကိုအရမ်းဒုက္ခပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးဖြစ်အောင် တော်တော်လေးသွင်းယူပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော် တော်လေး ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
မေး- နောက်ထပ်ရော ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်တွေ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဦးမလား။
ဖြေ- ဟုတ်ကဲ့။ နောက်ထပ်လည်း ဗီလိန်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရမယ့် ဇာတ်မျိုးရခဲ့ရင် ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တဲ့ ဇာတ်မျိုးဖြစ်ရင် ရိုက်ဖြစ်ဦးမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ မျက်လုံးတွေ၊ နှုတ် ခမ်းတွေကိုဗီလိန်မှန်းသိသာအောင် လုပ်ထားရတဲ့ဇာတ်ရုပ်မျိုးပေါ့။ ပါးပါးလေးနဲ့ ယုတ်မာလို့ ယုတ်မာမှန်းမသိတဲ့ ဇာတ်ရုပ်မျိုးကိုလည်း လုပ်ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။
မေး- ခပ်အေးအေးချိုချိုဇာတ်ရုပ်ကနေကွဲထွက်ပြီး အခုလို ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်မျိုးကို လုပ်တယ်ဆိုတော့ အဲဒီလို Challenge လုပ်ရတာကို ကြိုက်တာလား။
ဖြေ- ကျွန်တော်က သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာပါ။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ပုံမှန်မြင်နေကျ ဇာတ်ရုပ်မျိုးမှာပဲ မမြင်စေချင်ဘူး။ ကာရိုက်တာအစုံမှာ ထပ်တူကျအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော် ဒီဇာတ်ကားမှာဆိုရင် Challenge တစ်ခုအနေနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ နောက်လည်း အခုလိုမတူကွဲပြားတဲ့ ဇာတ်ရုပ်တွေမှာ ထပ်တူကျအောင်သရုပ် ဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်ပါတယ်။
မေး- ဒီဇာတ်ကားမှာပရိသတ်တွေကိုပေးချင်တဲ့ message ဆိုရင်ရော။
ဖြေ- ဒီလို အောက်လမ်းပညာလိုအရာတွေက မစမ်းသပ်သင့်ဘူး။ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တဲ့တာတွေကို ဘယ်တော့မှမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဆိုတာကို ပညာပေးအနေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတာပါ။
မေး- ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးတုန်းက ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတွေရှိရင် သိပါရစေ။
ဖြေ-ဇာတ်ကားရိုက်တုန်းက အောက်လမ်းဆရာအိမ် သွားတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းဆိုရင် ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကြည့်လို့ကောင်းနေတယ်။ တကယ်ရိုက်တုန်းကတော့ အခန်းတစ်ခုလုံးက အမှောင်ထားပြီး ရေနံဆီမီးတွေ အများကြီး ထွန်းထားတာဆိုတော့ အဲဒီအခန်းထဲမှာ နှစ်နာရီလောက် နေပြီးသွားရင် ခေါင်းတွေ မူးလာလို့ အပြင်ပြန်ထွက်ရတယ်။ ဟိုတယ်တွေပြန်ရောက်ပြီဆိုရင် နှာခေါင်းထဲတွေမှာဆိုရင်လည်း အမည်းတွေချည်းဖြစ်နေရော။ နောက်ပြီး ရေခဲတိုက်ထဲမှာ အလောင်းဝင်ဖောက်တဲ့ အခန်းဆိုရင် ကိုယ်ကတော့ ရိုက်နေတုန်းမို့ ဇောနဲ့မသိပေမယ့် ကျန်တဲ့စက်အဖွဲ့သားတွေနဲ့ မိတ်ကပ်ဆရာတွေကတော့ နောက်ခံသံပြားတွေပေါ်မှာ အရိပ်တွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်လို့ ပြောကြတယ်။
မေး- ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ရတဲ့ နောင်နောင်ဇာတ်ရုပ်က အလင်းရောင်အတွက် ဘယ်လောက်အထိ စိန်ခေါ်မှုရှိခဲ့လဲ။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားက ကိုဝိုင်းနဲ့ တတိယမြောက် လက်တွဲရတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်သလို ဒီ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်လည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက ကိုယ့်ကို နောင်နောင်အဖြစ်မြင် တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အားပေးလက်ခံမှုက ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကို တော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က တစ်ချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ သရုပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ကို နောင်နောင်က တော်တော် စိတ်ယုတ်ပါလားဆိုတာမျိုး ခံစားမိတယ်။
မေး – အလင်းရောင်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတစ်လျှောက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော အခုလက် ရှိအခြေအနေကို ကျေနပ်တယ်လို့ပြောလို့ရမလား။
ဖြေ- အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ ကျေနပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အနုပညာခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ အခက်အခဲတွေလည်းအများ ကြီးကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ ထင်မှတ်မထားတဲ့ အချိုးအကွေ့တွေလည်း တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ အရမ်း စိတ်ဓာတ်ကျ အားငယ်တဲ့အချိန်တွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး လမ်းညွှန်သင်ပြမှုတွေရတယ်။ သူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့အတူ အနုပညာခရီးလမ်းမှာလည်း တိုးတက်မှုတွေရလာတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အခုလိုကြိုးစားခွင့်ရတဲ့အနေအ ထားတစ်ခုကိုကျေနပ်ပါတယ်။ နောက်လည်း အများကြီးဆက်ပြီး ကြိုးစားသွားပါဦးမယ်။
မေး- ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာရှိရင်။
ဖြေ- ဒီဇာတ်ကားလေးက ကျွန်တော့်အတွက် တကယ်ကိုအမှတ်တရတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ဘ၀မှာရော သရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပါ တစ်ခါမှမကြုံဖူးခဲ့တဲ့ မျက်နှာကို တံတွေးနဲ့ အထွေးခံရတာကလည်း ခြောက်ခါ၊ ခုနစ်ခါလောက်ကို ရှိခဲ့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားက ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း သရဲကားတစ်ကားဖြစ်သလို ရသမြောက်တဲ့ဇာတ်ကား တစ်ကားလည်းဖြစ်မှာပါ။အကြံပေးကြပါလို့ ။
Posted in EntertainmentTagged ရုပ်ရှင်LeaveaComment on အလင်းရောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on July 29, 2018 by စုမှူးနိုင်
မြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းလိုလို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပတ္တိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလို့ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်ကျော်လောက်ကတည်းက စတင်ခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်ထိအောင် အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေကြောင့် ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ လက်ရှိမှာတော့ ကော်မတီအသစ်တစ်ရပ်ကို အစိုးရပိုင်းက တာဝန်ယူဖွဲ့စည်းပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထဲမှာ ရိုက်ကူးပြီးစီးနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပြင်ဆင်မှုတွေထဲမှာ လူငယ်ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်ကာလတွေကို ဒီဇာတ်ကားအတွက်ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် ကျော်ကျော်မျုိုးလည်း ပါဝင်တာကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ကျော်ကျော်မျိုးတစ်ယောက် ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲဆိုတာကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
မေး – ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အတွက် ပါဝင်ရွေးချယ်ခံဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကို ပြန်ပြီး ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အတွက် လူခေါ်ပြီး ရွေးချယ်မှုပထမအကြိမ်မှာ လူတစ်ရာကျော် ပါဝင်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး သုံးယောက်ကို ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့စိတ်တိုင်းကျမဖြစ်သေးတဲ့အတွက် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီး လူခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲဒီတုန်းက ၂၀၁၁ ခုနှစ် အင်ဒိုနီးရှားမှာလုပ်တဲ့ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးအသင်း ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာ နိုင်ငံတော် သီချင်းဆိုတဲ့အချိန် ကင်မရာတွေက တစ်ယောက်ချင်းအနီးကပ်ရိုက်ပြတဲ့အချိန်မှာ ပရိသတ်တွေက ကျော်ကျော်မျိုးလည်း တူတယ်။ သွားလျှောက်သင့်တယ်ဆိုပြီးပြောလာကြတယ်။ ပြိုင်ပွဲက ပြန်လာချိန်မှာ လည်း အားပေးတဲ့သူတွေကလည်း များတယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း ထပ်ပြီး လူခေါ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်သွားလျှောက်ဖြစ်တယ်။ လူအယောက် ၈၀ ကျော်လောက်ထဲမှာမှ ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။
မေး – ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက် စပြီးရွေးချယ်ခံရချိန်ကစပြီး ဒီဇာတ်ကားအတွက် ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ထိ စိတ်နှစ်ခဲ့လဲ။
ဖြေ – ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်အတွက် ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခံရပြီး ဒီရုပ်ရှင်အတွက် ကျွန်တော်စပြီး ဘက်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်က ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်အတွက် တကယ်ကို ခေတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ လက်ရွေးစင်ထဲလည်းပါတယ်။ လစာလည်း ကောင်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ခံယူလိုက်တာက ဒီဇာတ်ကားမှာ ကျွန်တော်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရခြင်းက လူဖြစ်ရကျိုးနပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ခံယူခဲ့တယ်။ ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ ပိုက်ဆံရှိတိုင်းလည်း မရဘူး။ လုပ်ချင်တိုင်းလည်း လုပ်လို့မရတဲ့အလုပ်မျိုးလေ။ အဲဒီလိုပဲ စိတ်နှစ်ထားပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။
မေး – ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ်မှာရော ကျော်ကျော်မျိုးရဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်က ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ – ဗိုလ်ချုပ်က သူ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးကို နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် ရှင်သန်ခဲ့တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အနေအထိုင် အစားအသောက်လို ကိစ္စသေးသေးလေးတွေမှာတောင်မှ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးထားတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ထားက လေးစားဖို့ကောင်းလွန်းပါတယ်။
မေး – ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုတွေကို ဘယ်အချိန်ကစပြီး လုပ်ဖြစ်ခဲ့လဲ။
ဖြေ – သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ပြီး ဒီဇာတ်ကားအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်မှာစပြီးလုပ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့်အတွက် နေထိုင်စားသောက်မှုကစလို့ အစစအရာရာမှာ လိုလေးသေးမရှိတဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ ဇာတ်ကား ရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက် အစစအရာရာပြန်ပြီး ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ဖြစ်တယ်။ ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဲ့ တနလာင်္နဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးတွေမှာ ဆရာဦးမြဟန်တို့ ဦးဇော်လင်းတို့နဲ့အတူ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကို အသေးစိတ်ထဲ ထဲဝင်ဝင်လေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့ လေ့လာမှုတွေလုပ်တယ်။ အင်္ဂါနဲ့ကြာသပတေးနေ့တွေမှာ မြင်းစီးသင်ရတယ်။ အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေးနဲ့သောကြာ ညနေပိုင်းတွေမှာ ဂျပန်စာသင်ရတယ်။ စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတော့ ဆရာဦးရဲထွဋ်ရဲ့ အင်္ဂလိပ် စာနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေအတွက် သင်ကြားလေ့ကျင့်တာတွေလုပ်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး စစ်ပညာသင်တန်းတွေလည်း သင်ကြားရတယ်။
မေး – သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲ။
ဖြေ – သရုပ်ဆောင်ပိုင်းအတွက်ကတော့ ပထမတစ်ခေါက် လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုတွေမှာ ပြင်သစ်က ဒါရိုက်တာနဲ့သရုပ်ဆောင်သင်ရတယ်။ သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်လည်း ရထားပြီးပြီ။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းအတွက်ကတော့ ကျွန်တော်က ဒီခြောက်နှစ်လောက်အတွင်းမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း အကြိမ်ကြိမ်သရုပ်ဆောင် လေ့ကျင့်မှုတွေကို ရူးသွပ်စွာနဲ့ လေ့ကျင့်နေခဲ့တာဆိုတော့ ခုချိန်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တော့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ယုံကြည်တယ်။
မေး – ဗိုလ်ချုပ် ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေရင်း မရိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ နယ်ပြန်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ကာလက ဘယ်လောက်ကြာသွားခဲ့လဲ။
ဖြေ – ဇာတ်ကားက ရိုက်ကူးဖို့အတွက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြန့်ကြာနေခဲ့ချိန်မှာ ကျွန်တော် နယ်ပြန်သွားခဲ့တာကိုက သုံးလေးနှစ်လောက်ကြာခဲ့တယ်။
မေး – ဇာတ်ကား မရိုက်ကူးနိုင်သေးတဲ့ အချိန်ကာလကြာနေချိန်မှာ ကျော်ကျော်မျိုးအနေနဲ့အဓိကကြုံရတဲ့ အခက်အခဲက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
ဖြေ – အဲဒီအချိန်တွေမှာ တချို့က ကျွန်တော်တော့ ဘ၀ပြီးသွားလို့ ထင်ခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော့်အတွက် အဓိက ခံစားခဲ့ရတဲ့စကားက ‘မင်း ဇာတ်ကား မရိုက်တော့ဘူးလား’ ၊ ‘မင်း ဇာတ်ကားက ဘယ်လိုတုံး’ ဆိုတဲ့စကားတွေပဲ။
မေး – ဇာတ်ကား မရိုက်ဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ဖို့ရွေးချယ်ခံရခြင်းအတွက် နောင်တရတာမျိုးဖြစ်မိလား။
ဖြေ – အဲဒီလိုမျိုး နောင်တရတဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးရောအတွေးမျိုးရော ကျွန်တော့်မှာလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။
မေး – အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရော အနုပညာအလုပ်တွေဆက်ပြီး လုပ်သွားမလား။
ဖြေ – မရှိပါဘူး။ သရုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကလည်း ကျွန်တော်က ဒီဇာတ်ကားအတွက်ပဲ ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဇာတ်ကားပြီးသွားရင် သရုပ်ဆောင်အလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted in EntertainmentTagged ရုပ်ရှင်LeaveaComment on “အောင်ဆန်း” ဇာတ်ကား၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည့် ကျော်ကျော်မျိုးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on July 28, 2018 July 29, 2018 by နီမင်းဆွေ
36 Hours (1965) ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ပိုစတာတစ်ခု
“၀မ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးက သစ္စာဖောက်မှုဆိုတာ ရန်သူ့ဆီက လာလေ့မရှိဘဲ ခင်မင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေဆီကသာ လာလေ့ရှိလို့ပါပဲ”ဆိုတဲ့ ဆိုစကား တစ်ခွန်းကို ကြားဖူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီစကားလေးကို သတိရနေတဲ့အချိန်မှာ ပဲ “အမေရိကန်တစ်ယောက်ကို ကျွန်တော့်ကို ၃၆ နာရီလောက်ပဲ ပေးထားစမ်းပါ၊ သစ္စာဖောက်တစ်ယောက်ကို အဲဒီအချိန်မတိုင်မီ အတွင်း ကျွန်တော် ပြန်ပေးပြပါမယ်”ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြော်ငြာတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရလို့ အံ့သြမိတယ်။ ဒီမှာတင် အမေရိကန်လူမျိုးတွေဟာ သစ္စာမဲ့ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံကို မချစ်တတ်ကြလို့ ခုလိုပြောလိုက်တာလားလို့ တွေးမိပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အဲဒီလိုကြော်ငြာထားတဲ့ 36 Hours ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကို ကြည့်မိပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးရဲ့ စစ်ရေးချိန်ခွင်လျှာ ဟိုဘက်ဒီဘက် သိသိသာသာ အလေးမသာဖြစ်နေပြီး နာဇီဂျာမနီဟာ ဥရောပကို ကောင်းကောင်း ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အချိန် မှာ ဆိုဗီယက် ရုရှားက ခေါင်းဆောင်ကြီး ‘စတာလင်’က မဟာမိတ်စစ်သေနာပတိချုပ် အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ‘အိုက်ဆင်ဟောင်ဝါ’ကို”ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာ ကမ်းတက်မှာဖြင့်လည်း တက်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်ရဲဘော် တွေချည်း ဟစ်တလာ့ကို ထိန်းထားရတာဟာ ကြာတော့မလွယ်တော့ဘူးဗျ”ဆိုပြီး အပြစ်ပြောလာပါတော့တယ်။ သူပြောတာအမှန်ဖြစ်ပြီး ကြာလာရင် ပိုပြီး အတိုက်ရခက်လာမှာကို စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် မဟာမိတ်တွေဟာ အမြန်ကမ်းတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရသလို ကမ်းတက်ရမယ့်နေရာကိုလည်း အမြန်ရွေးရပါတော့တယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ‘ဒိုဗာ Dover ဆိုတဲ့ မြို့နဲ့ ပြင်သစ်က ‘ခယ်လေ’ Calais ဆိုတဲ့မြို့လေး နှစ်မြို့အကြားက အင်္ဂလိပ်အခေါ် ဒိုဗာရေလက်ကြား ပြင်သစ်အခေါ် ‘ပါဒီခယ်လေ’ Pas De Calais ဆိုတဲ့ ရေပြင်ကျယ်ဟာ မိုင် ၂၀ ကျော်ကျော်လေးပဲ ရှိပါတယ်။ ကမ်းခြေက လည်းကောင်း နှစ်ဖက်ဆိပ်ကမ်းတွေကလည်းကောင်း၊ လေကြောင်းအကူပေးမယ်ဆိုရင်လည်း လန်ဒန်နဲ့အနီးလေးမို့ မဟာမိတ်တွေ ကမ်းတက်ရင် အဲဒီနေရာကပဲတက်မယ်လို့ ဂျာမန်တွေက တစ်ထစ်ချယုံကြည်ထားကြတာပါ။ အိုက်ဆင်ဟောင်ဝါကလည်း ဂျာမန်တွေ အဲဒီလိုပဲ ယုံကြည်နေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းနေတာဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက အဲဒီနေရာက ကမ်းတက်မှာမဟုတ်ဘဲ ရေပြင်အကျယ် မိုင် ၅၀ အထက်လောက် မှာရှိပြီး ဂျာမန်တွေမျှော်လင့်မထားတဲ့ ‘နော်မန်ဒီ’ က ကမ်းတက်မှာမို့လို့ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ အဲဒီလိုထင်နေကြတုန်းပဲလား ဆိုတာကို အတည်ပြုနိုင်အောင် အိုက်ဆင်ဟောင်ဝါ က ၁.၆.၁၉၄၄ ရက်မှာ အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးတပ်က ဗိုလ်မှူးကြီး ‘ပိုက်’ James Garner ဆိုသူကို ကြားနေနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ပေါ်တူ ဂီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် ‘လစ်စဘွန်း’ကို စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ မဟာမိတ်တွေ မွေးထားတဲ့ သတင်းပေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီလူဟာ လစ်စဘွန်းက ဂျာမန်သံရုံး မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ စာရေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေယာဉ်နဲ့လိုက်လာပြီး လစ်စဘွန်းရောက်လို့ မကြာခင်မှာပဲ ပိုက်ဟာ ကော်ဖီဆိုင်မှာဆေးခတ်ခံလိုက်ရပြီး အရိုက်လည်းခံလိုက်ရပါတယ်။ ပိုက်ရဲ့ မေ့မြောနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ နောက်နေ့မနက်မှာ ဂျာမဏီကို ရောက်သွားပါတယ်။
ပိုက် ပြန်သတိရလာတဲ့အချိန်မှာ သူဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး မဟာမိတ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ဂျာမဏီက အမေရိကန်စစ်ဆေးရုံတစ်ရုံမှာ ရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူ့ဆံပင်တွေဟာလည်း ဖြူနေပြီး မျက်မှန်မပါ ရင် စာဖတ်လို့လည်း မရတော့ပါဘူး။ အိပ်ရာဘေးက သတင်းစာကို မျက်မှန်တပ်ပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သတင်းစာက ၁၅.၆. ၁၉၅၀ ရက်နေ့ထုတ်ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။ မကြာခင်မှာ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန် ဗိုလ်မှူး’ဂါဘာ’ Rod Taylor နဲ့ သူနာပြုဆရာမ ‘အန်နာ’ Eva Marie Saint တို့ အခန်းထဲကိုဝင်လာကြပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးဂါဘာရဲ့ ရှင်းပြချက်အရ ဦးခေါင်းကိုအရိုက်ခံထားရတဲ့ ပိုက်ရဲ့မှတ် ဉာဏ်ဟာ သုံးပိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။ ပထမအပိုင်းက လစ်စဘွန်းမှာ သူခေါင်းအရိုက်မခံရခင်ရဲ့ရှေ့ပိုင်း၊ ဒုတိယအပိုင်းကတော့ အရိုက်ခံရလို့ မေ့သွားတဲ့အချိန်ကစပြီး အခုပြန်သတိရလာတဲ့အချိန်ထိ ခြောက်နှစ်တာကြာသွား ပြီဆိုတဲ့ ကြားကာလအပိုင်း၊ နောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ အခုဆေးရုံကိုရောက်လာပြီး စသတိရလာတဲ့အချိန်ကနေ အခုစကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိအပိုင်းတို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပထမအပိုင်းတုန်းက မှတ်မိတာတွေကိုပြန်ပြောမှ ပျောက်နေတဲ့ ဒုတိယအပိုင်းကဟာတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြန်သတိရလာလိမ့် မယ်လို့ ဂါဘာက ရှင်းပြပါတယ်။ ဆေးရုံထဲမှာ အမေရိကန်ဂျစ်ကားတွေ အမေရိကန်ယူနီ ဖောင်းတွေနဲ့ သွားလာနေကြတဲ့စစ်သားတွေ သတင်းစာ ရေဒီယိုအသံလွှင့်အစီအစဉ်နဲ့ ပိုက်ဆီကိုလာတဲ့စာတွေအားလုံးဟာ အတုတွေဖြစ်ပြီး ပိုက်ကို တကယ်စစ်ကြီးပြီးသွားပြီလို့အထင်ရှိအောင် ဂျာမန်တွေက စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဂါဘာကိုမနာလိုဖြစ်နေတဲ့ ဂျာမန် အက်စ်အက်စ် (SS) ထောက်လှမ်းရေးတပ်က ဗိုလ်မှူး’ရှက်’ Shack ဟာ ဂါဘာလုပ်နေတာတွေကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီး ဂါဘာဒီလိုလုပ်နေရုံနဲ့ ပိုက်ဆီက ဘာသတင်းမှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘဲ သူတို့ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာနဲ့ ပိုက်ကိုရိုက်စစ်မှ သတင်းအမှန်ကို ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါဘာကို ၃၆ နာရီပဲအချိန်ပေးပြီး အဲဒီအချိန်အတွင်း ရအောင်မေးနိုင်ရင်မေး မမေးနိုင်ရင်သုံ့ပန်းကို အက်စ်အက်စ်က လွှဲပြောင်းယူမယ်လို့လည်း အပြတ်ပြောထားပါတယ်။ နောက်တော့ ပိုက်ကိုစစ်မေးတဲ့အခါ သူလည်း ရှိနေချင်တယ်ပြောလို့ ဂါဘာကခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။ ပိုက်လည်း ဂါဘာရဲ့ ကုသမှုကိုလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့ လစ်စဘွန်းကိုမလာခင် သူတက်ခဲ့ရတဲ့ အိုက်ဆင်ဟောင်ဝါဦးစီးပြီးလုပ်တဲ့ ကမ်းတက် စစ်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးမှာ သူသိခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေအားလုံးကို ပြန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရှက်နဲ့ဂါဘာတို့ဟာ သူတို့အလွန်သိချင်နေတဲ့ မဟာမိတ်တွေ ပြင်သစ်ကို ကမ်းတက်မယ့်နေရာဟာ ‘နော်မန်ဒီ’ဖြစ်ပြီး ကမ်းတက်မယ့်နေ့ဟာ ၅.၆.၁၉၄၄ ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကြားလိုက်ကြရပေမယ့် ရှက်ကတော့ လုံးဝ မယုံပါဘူး။
ပိုက်ဟာ လစ်စဘွန်းကို မထွက်ခွာခင် လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ စစ်ဆင်ရေးခန်းမထဲမှာ လက်ကို ဓားလိုထက်နေတဲ့ မြေပုံက စက္ကူစတစ်စ ရှခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု အဲဒီအနာရွတ်ဟာ လက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအနာကျက်ဖို့ ခြောက်နှစ်တောင်ကြာသလိုဖြစ်နေလို့ ဂျာမန်တွေရဲ့လုပ်ဇာတ်ကို သိမြင်လာပါတယ်။ ဆေးရုံအပေါက်မှာစောင့်နေတဲ့ တာဝန်ကျ တပ်ရဲတစ်ယောက်ကလည်း သတိဆွဲတာ အင်္ဂလိပ်တွေလိုမဆွဲဘဲ ဂျာမန်တွေလို ဖနောင့်နှစ်ခုကို ဖြောင်းခနဲမြည်အောင် ရိုက်ပြီး ဆွဲတာကိုလည်း တွေ့လိုက်ရလို့ ဒါတွေ အားလုံးဟာ အတုတွေဆိုတာကို ပိုက်သေချာသွားပါတယ်။ အန်နာ့ကိုစစ်မေးကြည့်တော့လည်း သူဟာ ဂျာမန်’အော့စ်ဝစ်’အကျဉ်းစခန်းကအကျဉ်းသူဖြစ်ပြီး သူနာပြုဆရာမ ဖြစ်တာရယ် အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တာတွေရယ်ကြောင့် ဒီနေရာကိုရောက်လာရတာဖြစ်ကြောင်း အကျဉ်းစခန်းကို ပြန်မသွားချင်လို့ ခိုင်းတာလုပ်နေရတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီကနေ့ဟာ ၁၉၄၄ ခုနှစ် ဇွန် ၂ ရက် သာဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်။ အန်နာက ပိုက်ကို ကူညီချင်တယ်ပြောလို့ အန်နာဟာ ပိုက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း အခန်းထဲက ထွက်ပြေးပြီး ပိုက်ဟာ သူတို့ ညာနေတာတွေကို သိသွားတဲ့အတွက် ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားနေပြီဖြစ် ကြောင်း အော်ပြောပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရှက်ရောက်လာပြီး ပိုက်နဲ့အန်နာတို့ကို စစ်မေးဖို့ ခေါ်သွားပါတော့တယ်။ ဂျာမန်စစ်တပ်လောကမှာ နာမည်ပြောင်နဲ့ Bullyboys လို့ ခေါ်လေ့ရှိကြတဲ့ အက်စ်အက်စ် ထောက်လှမ်းရေး စစ်သည်တွေဟာ ပိုက်နဲ့အန်နာတို့ကို နှစ်ရက်ကြာအောင် ညဘက်အိပ်ခွင့်မပေးဘဲ မျက်နှာကို မီးဆလိုက်နဲ့ထိုးပြီး စစ်မေးကြပါတယ်။ အဲဒီကရတဲ့စစ်ချက်တွေနဲ့ ကျန်တဲ့ နေရာတွေကရတဲ့သတင်းတွေကို စုပေါင်းကောက်ချက်ချပြီး မဟာမိတ်တွေဟာ ခယ်လေကပဲ ကမ်းတက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အထက်ကိုတင်ပြလိုက်ကြပါတယ်။ နောက် ရှက်ဟာ ပိုက်နဲ့အန်နာတို့နှစ်ဦးကို ဆေးရုံက သူတို့အခန်းထဲပြန်ပို့ပေးလိုက်လို့ အိပ်ရေးပျက်နေတဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာ အိပ်မောကျသွားကြပါတော့တယ်။ ဒါကို ဂါဘာက အခွင့်ကောင်းယူပြီး သူတို့အခန်းထဲက တိုင်ကပ်နာရီနဲ့ ပိုက်ရဲ့ လက်ပတ်နာရီကို တစ်ရက်တိတိ မြန်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောက်နေ့ ဇွန် ၄ ရက် သူတို့နှစ်ဦး နိုးလာပြီးနာရီကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဇွန် ၅ ရက် မနက် ၅ နာရီ ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ အဲဒီအ ချိန်မှာ ဂါဘာ အခန်းထဲဝင်လာပြီး “ခင်ဗျား ပြောတာတွေဟာ အကုန်မှန်တယ်ဗျာ လွန်ခဲ့ တဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကပဲ မဟာမိတ်တွေ နော်မန်ဒီမှာ ကမ်းစတက်ခဲ့ကြပါပြီ”လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ပိုက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ အလွန်ကျေနပ်သွားတဲ့မျက်နှာပေးကို ဂါဘာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဂါဘာက ၀မ်းသာအားရနဲ့ ပိုက်ကို “ဒီတစ်ခါတော့ ခင်ဗျားခံလိုက်ရပြီ၊ ကျွန်တော်နာရီတွေကို မြန်ထားတာ တကယ်က အခုမှ ဇွန် ၄ ရက်ပဲ ရှိ သေးတယ်”လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ အရေး အကြီးဆုံးစစ်ဆင်ရေးလျှို့ဝှက်ချက် သူ့ ကြောင့်ပေါက်ကြားသွားရပြီး သူဟာနိုင်ငံ့သစ္စာဖောက်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရပါပေါ့လား ဆိုတဲ့အသိကြောင့် ပိုက်ဟာ အရုပ်ကြိုးပြတ် ဖြစ်သွားရပါတော့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒါကို ကြည့်ပြီး ဂါဘာဟာ မဟာမိတ်တွေ နော်မန်ဒီ ကို ကမ်းတက်မယ်ဆိုတာ အခုမှ တကယ်သေချာသွားတော့တာဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့အကြီးအကဲ ဗိုလ်မှူးကြီး’အောစတာမန်း’ဆီကို အကျိုးအကြောင်းစာရေးပြီး ဆက်သားတစ်ယောက်နဲ့ အပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဆက်သားက စာကို အောစတာမန်းဆီ သွားမပေးဘဲ ထောက်လှမ်းရေးကို မျက်နှာလုပ်ချင်လို့ ရှက်ဆီကိုပဲ သွားပေးလိုက်ပါ တယ်။ ရှက်က သူ့ရဲ့ အက်စ်အက်စ် အကြီးအကဲကို အဲဒီစာသွားပြတဲ့အခါ မဟာမိတ်တွေ အမှန်တကယ်နော်မန်ဒီက ကမ်းတက်ကြရင်ဒုက္ခ၊ ငါတို့က အထက်ကို ခယ်လေက ကမ်းတက်မယ်လို့ပဲတင်ပြခဲ့မိတာ အခုတော့ သေပေါက်တိုးသလိုဖြစ်သွားပြီဆိုပြီး တော်တော် ကြောက်သွားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဇွန် ၅ ရက် မနက် ၁၀ နာရီလောက်ထိ နော်မန်ဒီဘက်မှာ ကမ်းမတက်ကြသေးဘူးဆိုတာကို သိလိုက်ရတော့ ပြန်ပျော်သွားကြပါတယ်။ တကယ်က ဇွန် ၅ ရက်က ရာသီဥတုအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အတွက် အိုက်ဆင်ဟောင်ဝါက နောက်တစ်ရက်ဆုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီနေ့က ကမ်းမတက်ဖြစ်ခဲ့ကြတာဟာလည်း အမှန်ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဂါဘာပိုက်နဲ့ အန်နာတို့ဟာ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ လူရှုတ်တွေလို့ အက်စ်အက်စ်တွေကသတ်မှတ်ပြီး သူတို့ကို အပြတ်ရှင်းဖို့ ရှက်ကို တာဝန်ပေးလိုက်ပါတော့ တယ်။
ဇာတ်လမ်းနောက်ဆုံးပိုင်းကို အကျဉ်းချုံးတင်ပြရရင် မဟာမိတ်တွေဟာ ၆.၆. ၁၉၄၄ ရက်နေ့မနက်မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံက နော်မန်ဒီကမ်းခြေကို တကယ်ပဲ ကမ်းတက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဂါဘာဟာ သူ့ကိုယ်သူ အဆိပ်ဆေးထိုး အဆုံးစီရင်လိုက်ပြီး ပိုက်နဲ့ အန်နာတို့ကတော့ ဂါဘာက ကူညီစီစဉ်ပေးခဲ့လို့ ကြားနေနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံထဲကို ချောချောမောမောရောက် သွားကြပြီး ရှက်ကတော့ ပိုက်တို့ကိုလိုက်ရင်း နဲ့ ဘယ်သူမှ အနားကပ်ခွင့်မရှိတဲ့ နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးနားရောက်သွားလို့ အစောင့်တွေရဲ့ ပစ်သတ်တာကို ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားဟာ သစ္စာဖောက်တစ်ယောက်အကြောင်း ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြသတော့မလိုလိုနဲ့ စစ်ဆင်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရဲ့အရေးကြီးပုံအကြောင်းကို အသားပေး တင်ပြသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုကိုဆင်နွှဲရာမှာ ကိုယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို ရန်သူမသိအောင် လုပ်ထားနိုင်ပြီး ရန်သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို ကိုယ်ကြိုသိအောင် လုပ်ထားနိုင်မှသာ စစ်ဆင်ရေးအောင်မြင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်အောင် ဘယ်လောက်ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ကြရသလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားကြည့်ဖူးတဲ့လူတွေ ပြန်အမှတ်ရမိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
Posted in FeaturesTagged ရုပ်ရှင်LeaveaComment on ပွင့်လင်းမြင်သာရှိဖို့ မလိုအပ်တဲ့အရာ
ဂီတပဒေသာကို မှီငြမ်းရိုက်ကူးမည့် ဂီတဇာတ်မြူးဇာတ်ကား Cats တွင် ပေါ့ပ်အဆိုတော် တေလာဆွစ်က အဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်မည်ဟု Variety နှင့် Hollywood Reporter တို့က ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ဆွစ်သည် ယင်းဇာတ်ကားတွင် အော်စကာဆုရ အဆိုတော်-သရုပ်ဆောင် ဂျနီဖာဟက်ဆန်၊ ရုပ်သံအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ဂျိမ်းစ်ကော်ဒန်နှင့် ဗြိတိန်သရုပ်ဆောင် အီရန်မက်ကယ်လင်းတို့ နှင့် တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
T.S Eliot ၏ ကဗျာစာအုပ်ကို အခြေခံပြီး တေးရေးဆရာ Andrew Lioyd Webber ရေးစပ်ခဲ့သည့် ဂီတပဒေသာကို ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် လန်ဒန်၌ ပထမဆုံးဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်လည်း ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ယင်း ဂီတပဒေသာကို Broadway တွင်လည်း ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သည်။
The King’s Speech နှင့် Les Miserables ဇာတ်ကားတို့ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည့် ဗြိတိန်ဒါရိုက်တာ တွမ်ဟူပါက Cats ဇာတ်ကားကို ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် စတင်ရိုက်ကူးမည်ဟု Variety မဂ္ဂဇင်းက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယင်းဇာတ်ကားတွင် ကိတ်ဟက်ဆန်က Grizabella အဖြစ် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆွစ်၊ ကော်ဒန်နှင့် မက်ကယ်လင်းတို့ ပါဝင်မည့်ဇာတ်ကောင်ကို အတိအကျမထုတ်ပြန်သေးသော်လည်း ဆွစ်သည် Bombalurina အဖြစ် ပါဝင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု Hollywood Re-porter က ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂရမ်မီဆု ၁၀ ဆုရရှိထားသည့် ဆွစ်သည် လက်တွေ့ဘ၀တွင်လည်း ကြောင်များကို ချစ်ခင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဆွစ်သည် သူ၏ ကြောင်များဖြစ်သည့် Olivia နှင့် Meredith တို့၏ဓာတ်ပုံများကို လူမှုမီဒီယာတွင် မကြာ ခဏဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆွစ်သည် Hannah Montana: The Movie၊ Valentine’s Day နှင့် The Giver ဇာတ်ကားတို့တွင်လည်း ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ဖူးသည်။
Reputation အယ်လ်ဘမ်ဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအဆိုတော်ဖြစ်ခဲ့သည့် ဆွစ်သည် ၎င်း၏ ကမ္ဘာလှည့် ဖျော်ဖြေပွဲခရီးစဉ်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။
Posted in EntertainmentTagged ရုပ်ရှင်LeaveaComment on Cats ဂီတ ဇာတ်မြူးဇာတ်ကားတွင် တေလာဆွစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်
ဒေါ်လာ ၁၁၃ သန်းအသုံးပြုခဲ့သည့် တရုတ်၏ဈေးအကြီးဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Asura သည် ပွဲဦးထွက်လက်မှတ်ရောင်းချမှု ၀င်ငွေစာရင်းတွင် အောင်မြင်မှုမရခဲ့သဖြင့် ယင်းဇာတ်ကားကို ရုပ်ရှင်ရုံများ၌ ပြသမှုအား ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၁၃ ရက်က ဖြန့်ချိခဲ့သည့် ယင်း ဇာတ်ကားသည် ပွဲဦးထွက်လက်မှတ်ရောင်းချမှုဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၃ သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်ဟု လက်မှတ်ရောင်းချမှုဝင်ငွေစာရင်းကို လေ့လာသုံးသပ်သည့် Maoyan ၀က်ဘ် ဆိုက်က ဖော်ပြခဲ့သည်။
“ဇူလိုင် ၁၅ ရက် ည ၁၀ နာရီကစပြီး Asura ဇာတ်ကား ဖြန့်ချိမှုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ချင်ပေမယ့် ကြည့်ခွင့်မရှိတော့တဲ့သူတွေကို တောင်းပန်ပါတယ်” ဟု ယင်းဇာတ်ကား၏ လူမှုမီဒီယာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီကို အခြေခံရိုက်ကူးထားသည့် စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကား Asura တွင်ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်များဖြစ်သည့် လီယိုဝူ၊ ကာရီနာလျူနှင့် တိုနီလျန်ကာဖိုင်တို့က အဓိကဇာတ်ကောင်များအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ခြောက်နှစ်ကျော် ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ယင်းဇာတ်ကားတွင် အထူး ပြုလုပ်ချက်ပါဝင်သည့် ပြကွက် ၂,၄၀၀ ပါဝင်သည်ဟု China Daily သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Alibaba Pictures က ယင်းဇာတ်ကားကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ဖြန့်ချိရန် စီစဉ်နေသည်ဟု မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်ဖြန့်ချိမှုတွင်လည်း အောင်မြင်မှု မရပါက ယင်းဇာတ်ကားအတွက် ဆုံးရှုံးမှုသည် ရုပ်ရှင်သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ တရုတ်၏၀က်ဝက်ကွဲအောင်မြင်သည့် ဇာတ်ကားအများစုအတွက် အသုံးပြုခဲ့ သည့် ငွေကြေးသည် Asura ၏ ထက်ဝက်ခန့်သာရှိသည်။ Asura ဇာတ်ကားသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရုပ်ရှင်သမိုင်းတွင် ငွေကြေးအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုမရခဲ့သည့် ပဉ္စမမြောက်ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်သည်ဟု Box Office Mojo တွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
Posted in EntertainmentTagged ရုပ်ရှင်LeaveaComment on တရုတ်၏ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးဇာတ်ကား Asura ပွဲဦးထွက် လက်မှတ်ရောင်းချမှု ၀င်ငွေတွင် အောင်မြင်မှုမရခဲ့
အမျိုးသားအဖြစ် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားသည့် ဇာတ်ဆောင်နေရာတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရန် ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံခဲ့မှုကြောင့် LGBT အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ ဒေါသတကြီးဝေဖန်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် ယင်းဇာတ်ကားရိုက်ကူးရေးအစီအစဉ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်ဟု စကားလက်ဂျိုဟန်ဆန်က ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် အနှိပ်ခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ပြည့်တန်ဆာဂိုဏ်း ခေါင်းဆောင် Dante ‘Tex’ Gill အကြောင်း ရိုက်ကူးမည့် Rub & Tug ဇာတ်ကားတွင် စကားလက်ဂျိုဟန်ဆန်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် မွေးဖွားခဲ့သော်လည်း အမျိုးသားတစ်ဦးအဖြစ် ပြောင်းလဲခံယူခဲ့သည့် Dante’Tex’Gill ဇာတ်ဆောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရန် မူလက လက်ခံခဲ့သည်။
ယင်းဇာတ်ဆောင်နေရာတွင် စကားလက်ဂျိုဟန်ဆန်အစား လိင်ပြောင်းထားသည့် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးသာ ပါဝင်သင့်သည်ဆိုသော ဝေဖန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဂျိုဟန်ဆန်ကို ယင်းဇာတ်ဆောင်အတွက် ကမ်းလှမ်းခြင်းသည် လိင်ပြောင်းသရုပ်ဆောင်များကို အကန့်အသတ်ရှိသော အခွင့်အရေးသာပေးမှုကို ပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သူအချို့က ဆိုသည်။
Amazon ကထုတ်လွှင့်သည့် Transparent ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင် ထရေ့စ်လိုင်ဆက်တီက ယင်းသည် ဟောလိဝုဒ်တွင် ကျယ်ပြန့်သည့်ပြဿနာတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
Dante’Tex’Gill အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ်လို့ ပထမဆုံး ထုတ်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာ LGBT အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ကျွန်မ ကြားသိခဲ့ရတယ်။ Dante ရဲ့ ဘ၀ဇာတ် ကြောင်းကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးဖို့ အခွင့်အရေးကို ကျွန်မ သဘောကျတဲ့အချိန်မှာ ဒီဇာတ်ဆောင်အတွက် လိင်ပြောင်းထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးသာ သရုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ပြောကြတာကို ကျွန်မ နားလည်လာတယ်” ဟု ဂျိုဟန်ဆန်က Out မဂ္ဂဇင်းသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
Rub & Tug ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးရေးအစီအစဉ်မှ ဂျိုဟန်ဆန်နုတ်ထွက်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက မှတ်ချက်မပေးသေးပေ။
ဂျိုဟန်ဆန်၏ နှုတ်ထွက်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လိင်ပြောင်းလဲခံယူထားသူများ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ချီးကျူးခဲ့ကြသော်လည်း တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးအတွက် ကာလကြာခရီးနှင်ရဦးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ဂျိုဟန်ဆန်သည် နာမည်ကျော် ဂျပန် စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဇာတ်ကားကို အခြေပြုရိုက်ကူးသည့် Ghost in the Shell ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သည့် ဇာတ်ကောင်ကြောင့်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။
Posted in EntertainmentTagged ရုပ်ရှင်LeaveaComment on ဝေဖန်မှုများကြောင့် Rub and Tug ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရေးမှ စကားလက်ဂျိုဟန်ဆန် နုတ်ထွက်